Magaalaa Finfinnee Addabaaba’ii Masqalaatti hordoftoota amantaa Musiliimaa loli baname – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMagaalaa Finfinnee Addabaaba’ii Masqalaatti hordoftoota amantaa Musiliimaa loli baname
Magaalaa Finfinnee Addabaaba’ii Masqalaatti hordoftoota amantaa Musiliimaa sooomana furuuf ba’aan irratti waraanni mootummaa dhukaasa bane.
Ebla 9, 2021 hordoftoonni amantaa Islaamaa akkaatuma kanaan dura baratameen, dirree masqalaarratti soomana furuuf yeroo ba’anitti, naannoo gamoo Baankii daldalaa Itiyoophiyaa haaraa ijaaramaa jirutti poolisiin Federaalaa dhukaasa banuudhaan gaaza imimmaanessuun uummata walitti qabame bittimsuuf yeroo yaalutti walitti bu’insi dhalate.
Maddi keenya garas jiru akka himetti, yeroo ammaa kana Aspaaltiin guddichi Meeksikoorraa gara Magganaanyaa geessu, Arat Kiiloorraa gara Boolee geessu cufamee jiraachuu nutti himuun, haalli magaalaa Finfinnee naannoo Hora Finfinnee jiru hedduu ulfaataa ta’uu dubbata.
Barsiisaa (Ustaaz) Amaddiin Jabaal toora Facebook isaaniirratti akka ibsanitti, gochaan akka kanaa walqixxummaa amantaa kan sarbuufi taatee sababa malee raawwatameedha. Paartiin Bilxiginnaa deggertoota isaanii waliin walitti qabaamanii dhiichisaa yeroo oolanitti, hordoftoota amantaa Islaamaa maqaa Koronaatiin bittimsuuf yaaluunis madaalliin dhugaa biyyattii keessa akka hin jirre agarsiisa jedhaniiru.
OMN: Yaa'ii Qeerroo Finfinnee Galma Barkumeerraa (Hagayya 18, 2019)